‘छोरालाई जीवन दिएँ, अब भविश्य दिनुछ’ भन्छन महेश
/ २०७६, १६ फाल्गुन शुक्रबार ०८:४० प्रकाशीत
१६ फागुन, विवाह गरेको चार वर्षसम्म महेशप्रसाद र गीता अवस्थीले सन्तान जन्माएनन् । यसबीचमा समाज र आफन्तहरु उनीहरुलाई प्रश्न गर्थे– बच्चा कहिले ?सन्तानको रहर त उनीहरुलाई पनि थियो । तर गीता काठमाडौं बसेर अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गर्दै थिइन् । महेश बैतडीमा रेडियो सञ्चालनमा व्यस्त । त्यसैले उनीहरुको योजना थियो, गीताको एमएको पढाइ सकिएपछि मात्र सन्तान जन्माउने ।०७५ मा गीताको पढाइ पनि सकियो । उनको पेटमा भ्रुण हुर्कन थाल्यो । सन्तान र श्रीमतीको स्याहारका लागि महेशले तीन–चार लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा पारिसकेका थिए । गीताको पेटमा शिशुले लात्ति हान्न थालेपछि अवस्थी दम्पत्तिको खुशी दुई गुणा भयो । नियमित स्वास्थ्य जाँच गराइरहे, शिशुको अवस्थाबारे अस्पतालले कुनै खराब रिपोर्ट दिएको थिएन ।
तर गीताले सन्तानलाई संसार देखाउन आफ्नो पेट चिर्नुपर्ने भयो । २४ असोज, २०७६ मा शल्यक्रियामार्फत गीताले छोरा जन्माइन् । ‘पाँच वर्षको प्रतिक्षापछि छोरालाई समाउँदा यति खुशी भएको थिएँ कि त्यसलाई शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ’, महेश सम्झिएरै दंग पर्छन् । शिशु जन्मिएपछि हस्पिटलले भन्यो, ‘बच्चामा सोडियमको मात्रा थोरै कमी छ । एक दिन मेन्टेन गरे पुग्छ ।’चार दिनपछि ह्याम्स अस्पतालको बेडबाट निस्किएर शिशुसहित अवस्थी दम्पत्ति सुकेधारास्थित कोठामा पुगे । बैतडीबाट महेशका आमा बा र आफन्त खुशी साट्न काठमाडौं आइपुगेका थिए । हर्षोल्लासमै न्वारान गरियो । छोराको नाम महेशले नै जुराए – शिवान्स अवस्थी ।
शिवान्सले धर्ती टेकेको १३ दिन मात्र भएको थियो । रातको ११ बजेपछि अस्वाभाविक रुपमा रुन थाले । कात्तिक महिना । छोरालाई चिसो पो लाग्यो कि ? उनीहरु छोरोलाई सेके, गीताले दुध चुसाइन्, न्यानो पारेर सुताउन खोजिन् । अहँ ! शिवान्सको रुवाइ रोकिएन । शिशुका लागि रुनु नै अभिव्यक्तिको एक मात्र माध्यम हो । भोक लाग्दा पनि रोयो, रोग लाग्दा पनि, दुख्दा पनि रोयो । किन रोयो ? पहिल्याउन भने अविभावकलाई महाभारत ।अर्को दिन हेर्दा शिवान्सको पेट भुक्क फुलेको थियो । एकाविहानै महेश र गीताले छोरालाई कान्ति बाल अस्पताल पुर्‍याए । डाक्टरले आकस्मिक कक्षमा राखेर शिवान्सलाई औषधी र सुइ दिए । दुई घण्टापछि अस्पतालले भन्यो, ‘बच्चाको अवस्था अलि जटिल भएकाले एनआईसीयूमा राख्नुपर्छ । तर हामीकहाँ बेड खाली